I-China Seawater e-Boat Flake Ice Machine Evaporator fektri kanye nabakhiqizi | CSCPOWER
Amanzi olwandle kwi-Boat Flake Ice Machine Evaporator
I-C.Seawater Ku-Boat Flake Ice Machine Evaporator: Izici ze-CSCPOWER Flake Ice Evaporator 1.CSCPOWER evaporator yenza iqhwa ngaphakathi ithangi lokuhanjiswa, bese ummese ususa iqhwa phansi odongeni olungaphakathi lwethangi lokuhwamuka, kuyilapho umkhulisi eqhubeka engashukunyiswa. 2.Ukuhlinzekwa kwesiqandisi kugcina njalo futhi kungeyona ukuvuza kokuthuthuka kokuqina kokusebenza. I-evaporator yenziwa ngokusebenza kahle kwesiqandisi kodwa futhi yehlise nezindleko zokusebenza. 3.Besides, yehlise umsuka ...
C.Seawater Kwesikebhe I-Flake Ice Machine Evaporator:
Izici ze-CSCPOWER Flake Ice Evaporator
I-1.CSCPOWER evaporator yenza iqhwa ngaphakathi kuthangi lokuhanjiswa, bese ummese ususa iqhwa phansi odongeni olungaphakathi lwethangi lokuhwamuka, kuyilapho i-evaporator ihlala ingashukunyisiwe.
2.Ukuhlinzekwa kwesiqandisi kugcina njalo futhi kungeyona ukuvuza kokuthuthuka kokuqina kokusebenza.
I-evaporator yenziwa ngokusebenza kahle kwesiqandisi kodwa futhi yehlise nezindleko zokusebenza.
I-3.Besides, inciphise isidingo sesikhala kanye nesisindo ngakho-ke i-2excellent yethusi elahlekayo, i-Stainless iron ne-alloy ekhethekile.
I-4.CSCPOWER evaporator isebenzisa ukwakhiwa okufanele kwamapayipi okuhambisa ukufudumeza okushisa, okungazange kuthuthukise ukusebenza kahle kwesiqandisi kuphela kepha futhi kwehlise nezindleko zokusebenza.
I-5.Besides, inciphise isidingo sesikhala kanye nesisindo ngakho-ke nokutshalwa kwemali okulahlwayo.
I-6. ummese we-ice usebenza ngokujikeleza futhi ugoqa, unezinzuzo zokumelana okuncane, ukusetshenziswa kwamandla okuphansi, i-noiseless ne-powder kancane i-ice, ngokuqhathaniswa nommese weqhwa onqunyelwe.
7.I-evaporator ithatha izinzuzo zobuchwepheshe bokukhiqiza ngokunemba.
I-8.Isethi ephelele yokufaka i-welding, i-handling kanye nokususwa kwengcindezi kusunguliwe ukuze kuqinisekiswe ikhwalithi kanye nokusebenza kwayo kokusebenzela endaweni eholayo.
CSCPOWER Flake Ice Evaporator Izinzuzo:
I-1.Scene Display yokubambisana okulula.
I-Welding Weldless kanye nokwakha isikhathi esisodwa.
B.Inner wall groove processing
Ukwelashwa kwe-C.Thermal, ukhiye obalulekile ekusebenziseni isikhathi eside.
3.Usebenzisa zonke izingxenye ezinhle ukwethembisa ikhwalithi nesikhathi sokuphila.
Imikhiqizo eyenziwe ka-4.Yenziwe ngendlela exakile.
Ishadi Lephrofayili Ye-Flake Ice Evaporator:
Izincazelo zomkhiqizo oyisampula-8Ton / ngosuku Amanzi olwandle e-Ice Evaporator ku-Boat Use:
1) Idatha yezobuchwepheshe:
Izinga lokushisa lamanzi elijwayelekile
Okuphakelayo ububanzi wamapayipi amanzi
Isidingo sefriji esidingekayo
Inani lamandla afakiwe
Amandla wokunciphisa kabusha
Amandla wepompo lamanzi
Indawo yokudlulisa ukushisa
1) Ikhebuli Yokucushwa Komkhiqizo:
Insimbi Engagqwali 316
Japan Ukuthwala insimbi
irowu ephindwe kabili yokuxhumana ibhola
Ukuthwala okujulile kwebhola ibhola
Umugqa owodwa oyi-roller taper roller
Zhejiang Lituo Insimbi
Ukumelana ne-acid ne-alkali
Esedlule: I-Flake Ice Machine Evaporator
Olandelayo: Umshini we-Tube ice-1T
i-flake ice evaporator-10T
Amanzi olwandle olwandle e-Land Flake Ice Machine Evaporator
i-flake ice evaporator-3T
i-flake ice evaporator-8T-SUS316